राजनीतिमा उमेरहद अराजनीतिक हो : पौडेल
२०७८ असोज १५ गते
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक दलभित्र उमेरहदको व्यवस्था अप्राकृतिक र अराजनीतिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार (आज) तनहुँ पुगेका नेता पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद लागू गरिएको सन्दर्भसमेत जोड्दै पौडेलले ‘केही नेता सिध्याउन र केही नेता जोगाउन’ उमेरहदको व्यवस्था गरिएको टिप्पणी गरे । ‘एमाले पार्टीले अघिल्लो महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद लगायो,’ पौडेलले भने, ‘त्यसबाट एमालेको उपलब्धी के भयो ? उसको उपलब्धी भनेको एमालेभित्रका लोकप्रिय, लोकतान्त्रिक, निष्ठावान् र चरित्रवान् दुईजना नेतालाई सिध्याइयो । भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंहजस्ता लोकतन्त्रवादी र इमान भएका नेता सिध्याउन ७० वर्षे लाग्यो ।’
अधिकारी र सिंहलाई पाखा लाएपछि फेरि उमेरको कुरा हराएको पौडेलको भनाइ थियो । भने— ‘बलियाले अन्तै लगिहाले कुरा । अहिले फेरि केपी ओली ७० नपुग्दै अधिवेशन भए लागू हुन्छ, ७० पुगे भने फेरि हटाउँछन् ।’ यस्तै पौडेलले कांग्रेसमा पनि विगतमा एक व्यक्ति, एक पदको अवधारणा ल्याएर डा. रामशरण महतलाई राजीनामा दिन लगाइएको तर अरुलाई नियम नलागेको बताए ।
आफूले गर्न नसकेपछि ओलीले जथाभावी बोल्न थाले : मिनेन्द्र रिजाल
मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौँ : मन्त्री खाण